Publications nokubhala izihloko, Copywriting
Seo-copywriting okwamanje kubhekwe ukudalwa uhlobo eziphambili lwezihloko kumawebhusayithi. Inhloso yayo ukuheha abasebenzisi umthombo kusukela izinjini. Ukuze yokugcina Lwenziwe, kubalulekile ukwenza umbhalo ukuze bazi amarobhothi njengoba eqondene nombuzo ethile.
Eqinisweni, it uya okuthile okunjengokuthi: copywriter ubhala isihloko, ukwethula ngesikhathi esifanayo emzimbeni wakhe imishwana elisemqoka ukuthi Inethiwekhi yomhlabajikelele yama-abasebenzisi ukusetha kubha yokusesha injini. Kulokhu, umdali abanolwazi tematheksthi uzibophezele ekuqinisekiseni ukuthi nemibuzo ngokulinganayo basakaza kulo lonke ncwadi futhi kuphindwe kakhulu ngokuvamile.
I batusa ukubheka usizo okubonakalayo SEO copywriting. Lunikeza zonke izinto okumelwe icatshangelwe uma udala sihloko esisha, lapho umbhali ufisa ukuletha kuya phezulu. Futhi kule ncwadi Nanka amaphuzu ukukusiza ekuthuthukiseni indawo ngosizo imibhalo.
Inombolo avumelekile angukhiye embhalweni
Ngowokuqala ngqa kufanele ngokuthi isidingo ukusebenzisa angukhiye ukuze robot awucacisanga umbhalo njengoba spammed. Ngaphambili izinsiza eliphansi Abadali egcwele nenzalo yabo elakhiwe sinonimizirovannymi noma izihloko, okuyinto ezisetshenziswa inombolo enkulu ukusesha, ngezinye izikhathi ngokuphelele engafanele isihloko.
Ngakho, Webmaster yokungathembeki wathola usesho kusukela izinjini. Futhi omunye izivakashi ngesikhathi benza amasayithi abo babebalelwa ezinkulungwaneni ngosuku. Cabanga ukuthi bangaki abantu sebehola ku traffic Arbitrage! Kodwa izikhathi sezishintshile, yelucwaningo babé okuthuthukile, futhi manje amawebhusayithi esolwa injini ugaxekile, umane baphume Inkomba.
Manje i-Internet buya inethiwekhi, okuyinto wacaphuna kuphela labo imithombo eziye zenziwa abantu. Lokho - aqukethe imininingwane ewusizo futhi ulwazi, futhi - kokuba umklamo agcwele. Ngamunye indawo sihloko nakanjani ibe eyakhayo futhi kufanele bakunikeze izimpendulo ofundayo yonke imibuzo ezivukayo kuwo.
Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ukufunwa copywriters onekhono futhi rewriter anda. Ngesikhathi esifanayo kunesidingo futhi nande zabo, ngenxa amaphrojekthi Inthanethi iba ezinkudlwana, kufanele ibuyekezwe nsukuzonke, futhi lokhu kudinga inani elikhulu lokuqukethwe. Labo kubantu wabhala umbhalo ngaphambi, asisakwazi ukumelana nalomsebenzi nenani elikhulu oda.
Futhi uma thina acabangele izidingo anda abanikazi indawo, kungaba bazitshela ukuthi nge oda ekhethekile Ungasingatha amandla amaphesenti ayishumi azo zonke imibhalo Abadali. Ngokuhamba owazi copywriting seo, indlela yokulawula injini yokusesha, kodwa hhayi bonke ababhali luthela ukuthi kuyini nokuthi ukusisebenzisa ngokwenzuzo umkhuba.
Iningi lazo musa ngisho bathathe umsebenzi, okuyinto ahlinzekwa ngokuvumelana ukuze lelisu Article usesho inobudlabha. Kodwa isimiso, akukho eziyinkimbinkimbi, kudingeka nje umkhuba emfushane nemishwana ongaziwa ngeke kalula angena emzimbeni iyiphi shicilelo.
Advanced seo-copywriting ukusebenzisa eyodwa kuphela elisemqoka ngalinye ayizinkulungwane izinhlamvu tetheksthi. It is uvunyelwe ngisho washintsha inguqulo yakhe inani elifanayo izinhlamvu. Ngakho, embhalweni izinhlamvu eziyinkulungwane namakhulu amabili Kuyothi kungekho kuka izicelo ezimbili, ezingafani kusuka komunye nomunye.
Quality umbhalo izinjini uncamela
Phakathi kwezinye izinto, ukuthi isihloko ngasinye kufanele kube esifundekayo. Ngamanye amazwi - umbhalo kumele kube sobala ukuba wonke umfundi, kungakhathaliseki ubudala kanye nezinga lentuthuko. Ngakho-ke copywriter ukhetha amazwi anjalo, namatemu musa ziphoqe umsebenzisi ukufuna usizo lokuthola injongo yabo kwezinye izinsiza zokuxhumana.
Ngenjongo efanayo - ukugcina izivakashi kusayithi kukhona izinto ayinawo umbono jikelele mayelana nezihloko lapho abazinikele, futhi manual egcwele. Ngakho, umfundi ngeke ukuchitha isikhathi kuseshwa ukushicilelwa egcwele, lapho ngesineke sonke "A to Z". Ukuze orientation lomsebenzisi elingcono Kunconywa ukuba linqume engezansi.
Lokho umbhalo awuzange zaspamlen amazwi, it is hhayi ezihlobene isihloko ukuthi wayehlose ukukhanyisela kube omqondofana ekhethiwe. Akunandaba ukuthi hlobo luni ibinzana okukhulunywa, kubalulekile ukubhala isihloko ukuze rep Babembalwa kakhulu. Amaphuzu yokugcina ezingeni kulungiselelwa izincwadi kombhali.
Ukucabanga nendlela yokulawula injini yokusesha, kubalulekile ukuzindla ngendlela ukubhala imibhalo esiyingqayizivele. Lesi sibalo mhlawumbe ebaluleke kakhulu okwamanje. Akwamukelekile ukudala okuqukethwe, izingxenye zazo ayafana kwezinye izinto ezibekwe kumasayithi ezihlukahlukene kuwebhu. Ukuze ubone ukuthi ubunjalo izinhlelo ezikhethekile zadalwa.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi seo-copywriting - lena isihloko sina, lapho iyunithi zezikhali. Kuphela kubalobi uhlakaniphe ngempela futhi abanolwazi ezihloko angalihlambalaza okudaliwe yabo iyiphi isayithi e phezulu izinjini. Kulokhu, umnikazi umthombo uzokwazi ukujabulela abafumana hhayi kuphela ingane yakhe, kodwa futhi ukwandisa isibalo izivakashi kusayithi yayo.
Armagnac nogologo: umehluko uphuzo. Umehluko omkhulu kusukela Armagnac brandy
Army of Tajikistan: impilo, engu-ukubuthelwa empini, isibalo
Indlela yokwenza impumuzo esheshayo komzimba?
Imbangela igazi sezinyawo e ingane: ngegciwane noma ukudla?
Umlando we-thermometer. Izinhlobo zomculo yesimanje for ukulinganisa izinga lokushisa
Paresthesia: ukuthi kuyini futhi kanjani ukubhekana nale nkinga